LEGO သည် Harry Potter Deathly Hallows တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်သည်
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 325 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်, 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် Deathly Hallows, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်မီးသတ်၏ Goblet, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်တစ်ဝက်-သွေးမင်းသား, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် Phoenix ၏အမိန့်, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၏ကျောက်, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် Azkaban ၏အကျဉ်းသား, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, မားကို့စ Bessa, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည် Wizarding World အတွဲများအတွက်ပရိတ်သတ်တောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Deathly Hallows P ကိုart 1 နှင့်2။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မှစ၍ ဟယ်ရီပေါ်တာ theme သည် tiptoed နှင့်နီးလာသည်နှင့်အမျှ set များပေါ်မူတည်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ သွေးတစ်ဝက်မင်းသားနှင့် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်မူရင်းဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်ကိုယ်စားပြုမှုအနည်းဆုံးဇာတ်ကားနှစ်ကားဖြစ်သော Deathly Hallows
ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ပထမနှစ်သည် Philosopher's Stone နှင့် Secrets of Chamber ကိုအဓိကထားသည်။ ဒုတိယသည် Azkaban ၏အကျဉ်းသားနှင့် Fire Goblet သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Order of the Phoenix ကိုအခြေခံပြီးသွေးတစ်ဝက်မင်းသားပုံစံနှစ်ခုသာယူလာခဲ့တယ်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင် နှင့် 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု.
အဲဒါကကျွန်တော်တို့အများစုကိုယူဆဖို့ ဦး တည်ခဲ့တယ် Lego အုပ်စုသည် ၂၀၂၁ တွင် Deathly Hallows ရုပ်ရှင်နှစ်ကားကို အခြေခံ၍ အစုံများကိုဖြန့်ချိလိမ့်မည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်၎င်း၏နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်လှိုင်းကို ဖြတ်၍ soft reboot ကိုပေးထားပြီးရှိပြီးသား Hogw ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုသည်arts အစုံ (ကဲ့သို့ ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ in ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း) modular format အသစ်တစ်ခုကို ဖြတ်၍
Hallows ဝတ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်နေသောငါတို့သည်စိတ်ပျက်ခဲ့ကြသည်မှာသိသာထင်ရှားသော်လည်း ၂၀၂၁ သည်ပထမအစမှအနှစ် ၂၀ အမှန်ဖြစ်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ မျှော်လင့်ချက်တွေက ၂၀၂၂ မှာပုံမှန် ၀ န်ဆောင်မှုတွေပြန်မစခင်ဒီလမ်းကအမြန်လမ်းလွှဲတစ်ခုပဲကျန်ခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံး Potter ရုပ်ရှင်နှစ်ကားကိုအာရုံစိုက်တယ်။
သို့သော်ထိုမျှော်လင့်ချက်သည်ယခုမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားသည် အကြံဥာဏ်များနှင့်အုတ်များ မေးခွန်းထုတ်ပါ Lego Design Master Marcos Bessa သည်ယခုနှစ် Fan Media ပွဲစဉ်တွင်-အားရစရာမရှိသောတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ Marcos ၏အဆိုအရ Deathly Hallows မှုတ်သွင်းထားသောလှိုင်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်စားပွဲပေါ်၌ဘယ်သောအခါမှမရှိခဲ့ပါ Lego Phoenix လွန်နှစ်တစ်နှစ်ကို blank slate အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
“ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ပထမနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပထမဆုံးရုပ်ရှင်အနည်းငယ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရှင်းလင်းတဲ့ဗျူဟာတစ်ခုရှိတယ်၊ ပြီးတော့ [The Goblet of Fire] နဲ့ [The Order of the Phoenix] ကိုဆက်သွားဖို့ရှိတယ်” ဟု Marcos ကရှင်းပြသည်။ “ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ငါတို့မှာကွက်လပ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးအဲဒါက franchise ကိုဆက်နွှယ်နေစေဖို့အတွက်ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရမယ်။
“ ငါတို့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်art ဇာတ်လမ်းပေါ်မှာ၊ ဒါကြောင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်မယ့်အစားငါတို့ကအဓိကအချိန်တွေကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတို့ဘာကိုတွေးခဲ့လဲartfranchise ကိုခိုင်ခံ့စေသောခိုင်မာသောအစုံအချို့ကိုရွေးပြီး၎င်းတို့ကိုငါတို့ပထမဆုံးဒီဇိုင်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ပါ။ ”
သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူသည့်မေးခွန်းကရှိနေသေးသည် Lego Deathly Hallows P အကြားကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုငုပ်လျှိုးရန်အလွန်ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည်art 1 နှင့် 2? Marcos အရအနည်းဆုံးထိုအဖြေသည်ထိုရုပ်ရှင်များနှင့် Half-Blood Prince တို့ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်ထက်အသက်ကြီးသောပရိသတ်ကို ဦး တည်နေသည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ အကွာအဝေး။
“ ငါတို့ကနောင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာရုပ်ရှင်တွေကိုဖုံးကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကပိုမြင့်တဲ့အသက်အရွယ်ကို ဦး တည်သွားလေ့ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတာ” ဟုသူကပြောသည်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံတန်ဖိုးများသည်မှော်များရှိသည့်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်များနှင့် ပို၍ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည်၊ မှော်ပညာကျောင်း၏စကြဝthemeာဆောင်ပုဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများနှင့် ပို၍ လိုက်ဖက်သည်။ "
ဒါဟာ ၂၀၂၂ မှာငါတို့ကို Deathly Hallows အတွဲတွေယူလာပေးလိမ့်မယ်လို့အကောင်းမြင်တဲ့ Potterheads အတွက်သတင်းဆိုးဘဲ၊ Marcos ကမျှော်လင့်ချက်သေးသေးလေးတစ်ခုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ အနာဂတ်?"
၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်များ၊ နေရာများ၊ အဖြစ်အပျက်များမှသို့မဟုတ်သီးခြားမြင်ကွင်းများကိုဆိုလိုသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Deathly Hallows P ကိုart 1 နှင့်/သို့မဟုတ် Part သူတို့ ၂ ယောက်ဟာအနာဂတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဆီကိုဆက်ကြည့်ဖို့ကျန်နေသေးပေမယ့်ရုပ်ရှင်တွေကစားပွဲပေါ်မှာလုံးဝမပါပါဘူးလို့အကြံပြုတယ်။ အများစုသာဖြစ်သည်။
← Lego တိုင်း Speed Champions ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူရန်သတ်မှတ်သည်
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ The Vision? →